हिंसाको बाहानामा किसान आन्दोलन दबाउन सरकारको तयारी? - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारहिंसाको बाहानामा किसान आन्दोलन दबाउन सरकारको तयारी?
January 27, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
New Delhi: Farmers hoist flags at the Red Fort during the 'Kisan Gantantra Parade' amid the 72nd Republic Day celebrations, in New Delhi, Tuesday, Jan. 26, 2021. (PTI Photo)(PTI01_26_2021_000389B)
अघिल्लो लोकसभा सत्रमा केन्द्र सरकारले पास गरेको तीन कृषि कानूनलाई खारेज गर्नको लागि माग गर्दै दिल्लीको विभिन्न सिमाना क्षेत्रहरूमा विगत दुइ महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका किसानहरू आफ्नो पूर्व निर्धारित योजनाअनुसार हजारौं संख्यामा ट्रयाक्टर लिएर हिज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ट्रयाक्टर परेडमा उत्रिए।
तर दिल्ली पस्ने बित्तिकै धेरै ठाउँहरूमा किसान अनि पुलिसबीचको सङ्घर्ष चल्यो अनि त्यस बखत पुलिसले लाठिचार्ज अनि आँसु ग्यास पनि किसानमाथि छोडेको देखियो।
रिपोर्ट अनुसार दिल्लीको आइटिओमा दिल्ली पुलिस अनि प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा एकजना ट्रयाक्टर चालकको मृत्यु पनि भएको छ।
यो एक दुर्घटना मात्र थियो अनि मृतकको ट्रयाक्टर पल्टिएको कारण उनको मृत्यु भयो भन्ने पुलिसको स्पष्टिकरण छ। तर प्रदर्शनकारी भन्छन्, गोली लागेपछि चालकको ट्रयाक्टरको सन्तुलन बिग्रियो।
आइटिओ पुगिसकेपछि लुटियन दिल्लीतिर प्रवेश गर्ने कोशिश गरिरहेका किसानहरूको पुलिससँग त्यहाँ पनि भिडन्त भयो।
पुलिसले बल प्रयोग गर्दै लाठीचार्ज गऱ्यो अनि प्रदर्शनकारीमाथि आँसु ग्यासको गोला पनि दाग्यो। किसानहरूले तोकिएको समयभन्दा अगाडि नैं विभिन्न सिमाना विन्दुहरूबाट ट्र्याक्टर परेड शुरू गरेका हुन्।
अनुमति नपाए पनि किसान प्रदर्शनकारी मध्य दिल्लीको आइटिओ पुगे जहाँ हातमा डन्ठा बोकेर उनीहरूले पुलिसलाई दौडाइरहेको पनि देखियो।
किसानहरूलाई पूर्व नियोजित कार्यक्रम अनुरूप ट्रयाक्टर ऱ्याली निकाल्नको लागि अनुमति भने अगाडिबाटै दिल्ली पुलिसले दिइसकेको थियो। तर यसमा पुलिस पक्षले एउटा सर्त राखेको थियो। राजपथमा हुने गणतन्त्र दिवसको परेड सकेपछि मात्र ऱ्याली निकाल्न पाउने। ऱ्याली कुन मार्ग भएर जान्छ, त्यसबारे अघिबाटै दुवैपक्षबीच सहमति पनि भइसकेको थियो।
तर ऱ्याली शुरू भइसकेपछि धेरै स्थानहरूमा प्रदर्शनकारी किसानहरूले पूर्व निर्धारित मार्गलाई छोड्ने काम गरे। कति किसान ऐतिहासिक लाल किल्ला परिसरभित्र पनि प्रवेश गरेर प्रदर्शन गरे अनि लाल किल्लामा सिख धर्म निशान साहिबको झण्डा पनि फहराए।
पञ्जाब किसान युनियनको नेता रूलदू सिंह मनसाले इन्डियन एक्सप्रेससँग भनिरहेका थिए, केही युवा जो आइटिओ अनि लाला किल्लासम्म पुगिसकेका छन्, उनीहरू हामीजस्ता किसान हुन्। हामी उनीहरूसँग बात गरेर सुनिश्चित गर्ने कोशिश गरिरहेका छौं, प्रदर्शनकारीले निर्धारित बाटो नछोडुन्।
यता राष्ट्रीय राजधानीको नजिक सिङ्घु अनि टिकरी बोर्डरमा पनि किसानहरूको केही समूहले पुलिस अवरोध तोडेर दिल्लीतिर छिरेको खबर आउन थाल्यो। त्यसपछि केही अगाडि मुकरबा चोकमा उनीहरूले ब्यारिकेड अनि सिमेन्टको अवरोधक तोड्न शुरू गरेपछि पुलिससँग त्यहाँ पनि उनीहरूको झडप भयो अनि पुलिसले आँसु ग्यासको गोला वर्षायो।
अधिकारीहरूअनुसार सुरक्षाकर्मीले किसानहरूलाई सम्झाउने कोशिश पनि गरे अनि भने कि राजपथमा गणतन्त्र दिवस परेड समाप्त भएपछि मात्र उनीहरूलाई दिल्लीमा ट्रयाक्टर परेड गर्ने अनुमति दिइएको हो।
तर पनि तिरङ्गा झण्डा लगाइएको धेरै संख्यामा ट्रयाक्टर सडकमा देखियो। उनीहरूसित पुरुष अनि महिलाहरू ढोल बजाएर नाँचिरहेको पनि देखियो। सडकको दुइतिर उभिएका स्थानिय मान्छेहरू फूल वर्षाइरहेका थिए।
प्रदर्शनबीच हिंसा फैलिदैँ गइरहेको कुरालाई ध्यानमा राखेर केन्द्र सरकारले दिल्ली-एनसीआरका केही हिस्साहरूमा इन्टरनेटको सेवा बाह्र घण्टाको लागि बन्द गर्ने आदेश जारी पनि गर्नुपऱ्यो।
यता चिन्तामणि चोक लगायत अन्य धेरै ठाउँहरूमा प्रदर्शनकारी अनि पुलिसबीच झडप भएको खबर मिडिया हाउसहरूमा साँझसम्म व्यापक रूपमा चलिरहेको थियो।
यी मध्ये धेरैवटा मिडिया हाउसहरूले प्रदर्शनकारीले पुलिसमाथि गरेको ज्यादतिको भिडियो रिपिट मोडमा चलाउँदै शान्तिपूर्ण ऱ्यालीको नाममा किसानहरूले उपद्रो गरेको प्रमाणित गरिरहेका थिए। उता पुलिसले किसानहरूमाथि गरेको ज्यादतिलाई प्रसारण नगरेको आरोपमा धेरै मान्छे सोसल मिडियातिर ती मिडिया हाउसहरूतिर खनिएको पनि देखियो।
सोसल मिडियातिर लाल किल्लामा प्रदर्शनकारीले फहराएको सिख धर्मको झण्डालाई खलिस्थानी झण्डा भन्दै व्यापक रूपमा प्रोपागाण्डा पनि गरे। देशका केही नामी पत्रकारहरू समेतले ट्वीटरमा त्यो झण्डालाई सेयर गरेका थिए। पछि पुष्टि भइसकेपछि उनीहरु ट्वीट हटाउन बाध्य बने।
सरकारले प्रदर्शनकारीलाई हिंसाको लागि उक्साएर आन्दोलनको गलत छवि बनाउने काम गरेको आरोप माकपा लगायत केही विपक्षी दलहरूले लगाइरहेका थिए।
तर किसान सङ्घहरूको सङ्गठन संयुक्त किसान मोर्चाले ट्रयाक्टर परेडको बेला भएको हिंसामा सामेल मान्छेहरूबाट आफैलाई अलग गरेको छ। असामाजिक तत्वहरूको घुसपैठ भयो, अन्यथा आन्दोलन शान्तिपूर्ण चलिरहेको थियो, उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
सङ्घले त्यस तरिकाको ‘अस्वीकार्य’ घटनाहरूको निन्दा गरेको छ अनि दुःख व्यक्त गरेको छ। केही किसान समूहले अगाडिबाट तय गरिएको बाटो बद्लिएको कारण परेड हिंसक भएको उनीहरूले दावी गरे।
किसान ट्रयाक्टर परेडको बेला केही ठाउँहरूमा पुलिस अनि किसानहरूबीच झडप भएपछि काङ्ग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीले पनि मङ्गलबार भनेका छन्, हिंसा कुनै पनि समस्याको समाधान होइन अनि सरकारले देशहितलाई मध्यनजर राखेर तीनैवटा कृषि कानूनलाई वापस लिन जरूरी छ।
एउटा ट्वीट मार्फत उनले भनेका छन्, ‘हिंसा कुनै पनि समस्याको हल होइन। चोट कसैलाई किन नलागोस्, नोक्सान देशलाई नै हुन्छ। देशहितको लागि कृषि-विरोधी कानून वापस लियाजाओस्।‘
काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता शशि थरूरले प्रदर्शनकारी किसानहरूको एक समूहद्वारा लाल किल्लामा आफ्नो सङ्गठनको झण्डा फहराइनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्दै भनेका छन्, मैले शुरूदेखि नैं किसान आन्दोलनको समर्थन गरेको थिएँ, तर यो ‘अराजकता’लाई म स्वीकार गर्न सक्ने छैन।
यता माकपाले किसानहरूको ट्रयाक्टर परेडको बेला केही ठाउँहरूमा पुलिस अनि किसानहरूबीचको झडप भइसकेपछि मङ्गलबार केन्द्र सरकारमाथि निशाना जमाउँदै भनेको छ, किसानहरूमाथि आँसुग्यास प्रयोग गरिनु अनि लाठीचारज गरिनु स्वीकार्य छैन।
हिजको हिंसापछि आन्दोलनका दस प्रमुख नेतृत्वहरूमाथि प्राथमिकी दर्ता गरिसकेपछि केन्द्र सरकारले यसरी नै आन्दोलनको मुख्य नाइकेहरूमाथि हिंसाको विभिन्न मुद्दा थोपेर आन्दोलन दबाउने रणनीति अप्नाउने हो कि भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ।